JINGHPAW KASA: ဗမာစစ်တပ်မှ ဓာတုလက်နက် အသုံးပြုပစ်ခတ်
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ တပ်မဟာ (၅) နယ်မြေဖြစ်သော မြစ်ကြီးနား - ဗန်းမော်လမ်း နားလုံ နှင့် ဂန်ဒေါင်ယန်ကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပွားသော ကေအိုင်အေမျိုးချစ်ရဲဘော်များနှင့် ဗမာစစ်တပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ ဒီဇင်ဘာ (၂၉) ရက်နေ့တွင် ဗမာစစ်တပ်ဘက်မှ ဓာတုလက်နက်များ အသုံးပြုကာ ကေအိုင်အေကို တိုက်ခိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဗမာစစ်တပ်မှ ပစ်ခတ်လိုက်သော ဓာတုလက်နက် ကြောင့် ယခုအခါ ကေအေအိုင် မျိုးချစ်ရဲဘော် (၄၀) ကျော် အဆိပ်သင့် ဖျားနာနေကြောင်း ဆက်လက် သိရှိရပါသည်။ ဗမာအစိုးရသည် ကေအိုင်အေနှင့် တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားရာတွင် ဗမာစစ်တပ်ဘက်မှ ကျရှုံးမှ များပြာလာပါက ယခုကဲ့သို့ အကောက်ကြံကာ မသမာသော နည်းလမ်းများကို အမြဲအသုံးပြု တိုက်ခိုက်လျက်ရှိရာ ယခုတိုက်ပွဲတွင်လည်း ဗမာအစိုးရဘက်မှ လက်နက်အင်အား၊ လူအင်းအားသာမက၊ တိုက်လေယာဉ်များဖြင့်ပါ ကူညီတိုက်ခိုက်ရာ ဗမာစစ်တပ်ဘက်မှ ကျဆုံးမှု များပြာလာသောကြောင့် သူခိုးကျင့် သူခိုးကြံ အရှက်မရှိ ပြုလုပ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Burmese Government used bio-chemical weapon to fight Kachin soldiers in Na Lung and Gang Dau Yang villages, which is on the way of Myitkyina - Bamoh road, KIA’s (5th) Brigade area on 29th December, 2012. Now, over (40) KIA patriotic soldiers were affected poisoning by the firing of Burmese Government Army’s Bio-Chemical weapons. The Burmese Government army used to fire Chemical weapon when they had lost seriously in the battle. Currently, they are usingalot of soldiers, heavy weapons and military air force but they could not defeat to KIA thus Burmese Government uses Bio-Chemical weapon to kill all the KIA soldiers. We see very clearly of their cunning, shameful, wicked behavior to kill Kachin ethnic people.
dai asik hkrup ai myu tsaw share shagan ni hpe hpa hka shadu jaw mu; hpa hka gaw, gung dat shamat kau lu ai da.
ထုံး စံ အ တိုင်း လေ သိုင်း လဘာ ကြာ သိုင်း သုံးပြီ ဘော် တာ ရေ။
ရူပ လက် နက် လည်း သုံး တော့ မယ် ဆို ဘဲ။
ဒုက္ခ သည် တိုင်း ကွ က် လည်း ကျန် သေး တယ် လနန် ။
ဒါဆို ဘာမှမသုံးဘူးပေါ့။စစ်တပ်က တိုက်လေယာဉ်လဲမသုံးဘူးပေါ့။တိုက်လေယာဉ်သုံးဒါကညာဒါလား။
တစ်ကယ်သုံးဒါဆို Kia ကအဲလောက်ကြမ်းလား။
OR စစ်တပ်ကဝိဒါလား။KIAတောင် တန်းတူချရင်မနှိုင်ဘူးဆိုတော့အလကားသေနတ်ကိုင်ပြပြီထမင်းတောင်းစားဒဲ့သူတွေလား။ဒီလိုစစ်တပ်တောင်မနှိုင်တဲ့ ဘင်္ဂလား နဲ့ ယိုးဒယားဆို မပြောရက်တော့ပါဘူး။ငါဒါ အစိုးရဆို လဲ nuclear ရှိရင်အဲဒါ သုံးမှာ။ နှိုင်မှမနှိုင်ဒါ ရှက်စရာကြီး။helicopter တောင်မနှိုင်လို့jet သုံးရတယ်လို့။
ဘာ တွေ ရေး လဲ မ သိဘူး မြန် မာ စာ မြန် မာ နား မ လည် တော့ ဘူး ။ ရေး တာ ဘဲ အ ဆင့် မြင့်လို့ လား
အဆင့်မြင့် တာ မဟုတ်ဘူး မြန်မာစာ ဟာညံ့လို့ပါနော် နားလည်အေင်လဲကြိုးစားပေါ့
Naydun kachin said...
ဗမာတပ်မတော်တွေ တော်တော်အောက်တယ်ကွာပြည်တွင်းစစ်ကိုများ jetလေယာဉ်သုံးရတယ်လို့ ။စောက်ရှက်ကိုမရှိဘူး။ဒီပုံစံနဲ့များ မြန်မာနိုင်ငံကိုကာကွယ်အုံးမယ်တဲ့။ကြည့်လဲလုပ်ကြပါအုံး မြန်မာ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကြီးရယ်။လက်တစ်ဆုပ်စာတောင်မရှိတဲ့ KIA ကိုတောင်နိုင်အောင်မှမတိုက်နိုင်တဲ့ မြန်မာ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကြီးရယ်။စောက်ရှက်ကိုမရှိဘူး။အဲ့ဒီ သိန်းစိန်ကိုလဲ ဖင်လှိမ့်ကန်ဖို့ဘဲကောင်းတယ်။
Burmese people are never never good........
ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ကြေးဆိုရင်တော့ kia တပ်ကို နှစ်ဆတိုးထားရင်တောင်အသာ လေးတိုက်လို့နိုင်နိုင်ပါတယ် အခုက ရွာသားယောင်ဆောင်နေကြတယ် ပစ်ပြီးထွက်ပြေးတယ် လူတကာသွားတဲ့လမ်းကို မိုင်းတွေထောင်တယ် ပြည်သူတွေဆီက မတရားပိုက်ဆံတောင်းတယ် တပ်သား သစ်အတင်းစုဆောင်းတယ် ဒါတွေဟာ ပြည်သူတွေလက်မခံနိုင်တဲ့ အကြောင်းတွေပဲ ဒါတွေကို စစ်အစိုးရကသိသွားတော့ အချိန်တိုတိုနဲ့ သုတ်သင် နိုင်မယ့်နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်လိုက်တာပဲ ငြိမ်းချမ်းရေးမယူတော့ရော ဘာဂရုစိုက်စရာလိုလဲ ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ သုတ်သင်တာ ဖြစ်တယ် ကချင်အချင်းချင်းတောင်သေနတ်ကြောက်လို့သာ ငြိမ် နေရတာ ဘယ်သူကမှ မထောက်ခံတော့ဘူး အားလဲမပေးတော့ဘူး နှိပ်စက်နေတာက များနေပြီ အကုန်သေမှပဲ အေးသွားမှာ ...
Kia တပ်ရင်းတွေကအားလုံးမျက်မြင် ရှိနေဒါပါ။သွားတိုက်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ရောက်ဘူးတဲ့ ဖားကန့်က ဘေးက တပ်ရင်း၆ မှာဆိုရင်အရပ်သားဝတ်စုံနဲ့သူမရှိဘာဘူး။
KIA က အဆင့်မြင့်လို့ ဓါတုလက်နက်နဲ့တောင် ဆော်ရတာ။ အဆော်ခံလိုက်။ နောက်ဆိုရင် မျိုးသုန်း လူညွန့်တုံးမယ့် လက်နက်ပါ ပါဦးမယ်။ စောင့်နေ
လန့်ဖျား ဖျားတာပါ။ သေနတ် မကြားရင် မြန်မြန်ပြန်ကောင်း လာလိမ့်မယ်။
ဘယ်က ယူထားတဲ့ ဓါတ်ပုံလဲ။ မမြင်ဖူးတာနဲ့ ဓါတုလက်နက်လို့ အရူးချီးပန်းလျှောက်အော်မနေနဲ့ ဆောက်ပေါ ငပိန်းရဲ့။ နင်တို့ Blog က မဟုတ်မဟတ် ပလေစိ ချောက်ရေးတတ်လွန်းလို့ ။ရီရလို့ လာဖတ်တာ။
Hey Baby Don't laugh in blog.come to front line.You will see between joKe and reality.